Archive du 20190125
Governemanta vaovao Nahazo seza ireo akama
Nivoaka omaly ny didim-panjakana n° 2019 – 023 nanendren’ny filohan’ny Repoblika Andry Rajoelina ireo mpikambana vaovao ao amin’ny governemanta tarihan’ny praiminisitra Christian Ntsay.
CENI Madagascar 73 Miliara Ariary no lany tamin`ny fifidianana
97 Miliara ariary tany ho any ny vola nampiasain`ny vaomiera mahaleotena misahana ny fifidianana (CENI) nandritra ny taona 2018 araka ny tatitra nataon`ity vaomieram-pirenena ity izay nahitana ny lafiny ara-moraly,
Andry Rajoelina Ny ao an-dapa ihany no hamingana raha tsy mitandrina
Efa nanomboka tany amin’ny fomba fanomanana fampielezankevitra no hita fa niha nitombo hatrany ireo hoditr’akondro voatsipy nanoloana ny filoham-pirenena vaovao.
Olon’ny MAPAR Hasavoritaky ny ady seza…
Manomboka tsy re feo ny ankamaroan’ireo olon’ny MAPAR sy ny mpanohana fatratra an’i andry Rajoelina. Misy ny variana amin’ny ady seza, ao ireo tsy mahita hotenenina fa fanina tanteraka.
Lalàna momba ny fitsinjaram-pahefana Nampihena be ny sehatra hahafahan’ny faritra miasa
Ny fanovana maro tao anatin’ny lalàna 2014-020 dia nampihena be ny asan’ny faritra ary tsy miteraka fitsinjaram-pahefana tena izy, hoy ny lehiben’ny faritra (CR) Analamanga Ndratonomena Rakotonanahary.
Kaominina Ivato Nahazo fokontany 7 vaovao
Nisy ny fangatahan’ny mponina ny amin’ny hananana fokontany vaovao satria lehibe loatra ny fokontanin’ny tobin-tseranam-piaramanidina Ivato teo aloha izay iray tao anatin’ny kaominina.
Taratasin’i Jean Tairo amin’izay ary ee !
Efa ao daholo izany izao ny akama rehetra ry Jean ka atomboy amin’izay ary ity revy ity aa ! Miandry anao ny vahoaka ee !
Sehatra fizahantany Nohamafisina ny fiaraha-miasa amin’i Frantsa sy Alemaina
Hanatanteraka fampiofanana any Frantsa sy Alemaina ny Ofisy nasionalin’ny fizahantany eto Madagasikara (ONTM) nanomboka ny 22 janoary lasa teo ary tapitra ny 31 janoary ho avy izao.
Andro ratsy sy ora-mikija Lasibatra ihany koa ny any Atsimo
Ny faritra Atsimon’ny Nosy indray izao no mizaka ny voka-dratsin’ny faharatsian’ny toetr’andro.
Zava-pisotro Miala any indray ny vita amin’ny voaloboka
Ankoatra ny paoma, ny voasary dia efa nahavitana ranom-boankazo ihany koa ny voaloboka eto amintsika.
Rallye RIM andiany faha-40 Mbola hotontosaina any Moramanga amin’ity 2019 ity
Matotra ny filazan’ny tompon’andraikitra voalohany ao amin’ny Fanalamanga omaly fa mbola hotontosaina any Moramanga toy ny tamin’ny taon-dasa ny fanatanterahana ny fifaninanana RIM “Rallye Internationale de Madagascar”
Fikambanana AS Ramim’s Hisarika ny tanora tsy ho azon’ny mahadomelina
Herintaona mahery izao no nijoroan’ny fikambanana AS Ramim’s, izay manana foibe ao amin’ny distrikan’Ambatolampy ary efa manana mpikambana 1000 isa mahery sahady.
Eo am-pandrasana mahita ny atiny e !
Tafatsangana ny governemanta vaovao heverin’ny filoham-pirenena fa hahavita ireo veliranony sy fampanantenana nataony tamin’ny vahoaka.
Banky foiben’i Madagasikara Tsy mbola mieritreritra ny hamoaka vola vaovao
Nahoraka ny ho famoahan’ny Banky Foiben`i Madagasikara vola vaovao mitambatra toy ny 50 000 Ariary sy 100 000 Ariary ao anaty tambajotran-tserasera.
Orinasa Fanalamanga 2018 Nihoatra ny tokony ho izy ny vinan’asa vita
Nandeha araka ny tokony ho izy ny laminasa rehetra notanterahina tamin’iny taona 2018 nivalona iny ary nihoatra ny tokony ho izy mihitsy aza ho anay eto amin’ny orinasa Fanalamanga,
Halatra bateria amin’ny andrin-jiro Lehilahy iray voasambotra teny amin’ny faritr’i Masay
Taorian’ny fangalarana bateriana andrin-jiro mandeha amin’ny herin’ny masoandro misesisesy teto an-drenivohitra ny volana desambra lasa teo dia lehilahy iray no saron’ny polisim-pirenena teny amin’ny faritr’i Masay.
HALA-JAZA SY TANORA
Tena misy ny hala-jaza ary tsy tena zaza no lasibatra fa ireo adolatsento.
Fitsaram-bahoaka Nodimbiasan’ny fifamonoana
Lojikan’ny zava-misy eto amin’ny firenena ankehitriny izay iainan’ireo mponina andavanandro, indrindra ety an-drenivohitra ny rarin-tsaina.
Ranon’ny JIRAMA tapaka matetika Vokatry ny fahanteran’ny fotodrafitrasa sy ny fitomboan’ny filàna
Nitondra fanazavana manokana momba ny rano tapaka vatsiany, Rtoa Francesca Tsitohery Andriamampinona, talen’ny serasera eo amin’ny orinasa JIRAMA omaly.
Trano miorina ambony fefiloha Olona maro no efa notorian’ny APIPA
Tena mitera-doza tokoa ny fipetrahana manamorona ny fefiloha, indrindra amin’ny fotoam-pahavaratra tahaka izao.